सलमानलाई ज्यानको खतरा ! प्रहरीले रोकिदियो ‘रेस–३’ को सुटिङ
HOME » सलमानलाई ज्यानको खतरा ! प्रहरीले रोकिदियो ‘रेस–३’ को सुटिङ
मुम्बइ। बलिउड सुपरस्टार सलमान खानलाई ज्यानको खतरा भएपछि प्रहरीले फिल्म ‘रेस–३’ को सुटिङ रोकिदिएको छ । सुट्रि रोकिएसँगै सलमानलाई कडा सुरक्षाको बीच घर पठाइएको छ । रेमो डिसुजाको निर्देशनमा बन्न लागेको ‘रेस–३’ मा सलमान मुख्य भूमिकामा छन् । यसअघि यो फिल्मका अघिल्ला २ प्रिक्वेलमा सैफ अली खान मुख्य भूमिकामा थिए ।
पछिल्लो समय सलमानलाई मारिदिने धम्की आएको थियो । तर धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै फिल्म सिटिमा फिल्मको सुटिङ चलिरहेको थियो । प्रहरीले सुटिङ स्थलमै गएर सलमानलाई ज्यानको खतरा भएको भन्दै सुरक्षित स्थानमा जान सल्लाह दिएको थियो । सलमानले पनि प्रहरीको कुरा मान्दै सुटिङ रद्द गरेर कडा सुरक्षाका बीच घर फर्किएका छन् । सलमानलाई प्रहरीले सार्वजनिक रुपमा नआउन र सडकमा साइकल नचलाउन सल्लाह दिएको छ । केही दिनअघि डन लरेन्स विश्नोइले सलमानलाई मारिदिने धम्की दिएका थिए ।